Arabo lahatsary amin'ny chat
Arabo lahatsary amin’ny chat
Posted on 09.03.2019, 19:34 By Goodsite
Arabo chat no mahaliana ny maro isan-karazany ny mpitsidika izay hizara ny maniry ny hihaona tamin’ny solontenan’ny ny tontolo Arabo, get nahalala ny tantara sy ny kolontsaina. Mitsidika ny chat, dia afaka mahazo an-tsaina ny momba ny kolontsain’ny tontolo Arabo, izay ahitana ny fivavahana Silamo ho anisan’ny. Miditra ao ny tsara indrindra amin’ny chat-tserasera, ianao ho afaka mianatra be dia be ny zavatra mahaliana momba Lameka, ny toerana Masina ao amin ny Arabo, izay hanatanteraka ny Hajj-fivahiniana masina.
Fa koa, dia afaka foana ny resaka amin’ny teny frantsay sy malagasy, satria ireo mpampiasa Aterineto dia matetika ny tanora, izay mahazo fanabeazana tsy amin’ny Arabo oniversite, fa koa ao Amin’ireo oniversite eoropeana.
Ny sasany mponina ao amin’ny firenena Arabo na dia miteny rosiana
Online chat dia aoka fantatrao be dia be momba ny lafiny samihafa amin’ny fiainana ny Arabo. Raha toa ianao ka liana amin’ny tantara ny tontolo Arabo na ny literatiora — aza matahotra ny hangataka ny mpiara-mitory tamiko. Ao amin’ny lahatsary amin’ny chat, ny mponina ao amin’ny firenena Arabo dia mampiseho aminao ny fomba nitandrina izy ireo momba ny fanoratana ny teny. Ny zavatra fa ny soratra arabo dia oharina amin ity kolontsaina ity ny hatsaran-tarehy tonga lafatra ny vehivavy vatana. Ao amin’ny online chat ianao, dia azo antoka fa hahita ny namana liana amin’ny filôzôfia, na ny fanazavana momba ny fiainana sy ny asa ny iray amin’ireo malaza indrindra manam-pahaizana: filozofa, ny dokotera sy ny mpahay siansa Ibn Sine, antsoina hoe Avicenna tao amin’ny tontolo Tandrefana. Ao amin’ny lahatsary amin’ny chat, ianao koa dia afaka mianatra ny fomba fanamboarana ny nahandro arabo. Ny tena mahaliana azy ireo dia ny fomba fanamboarana ny kafe, satria ny dingan’ny ny fanaovana kafe misy sarotra ny fomba amam-panao. Ity fizarana ity dia ny ChatRoulette amin’ny teny arabo chat, manome ny fahafahana mifandray amin’ny ny mponina na firenena Arabo sy ny momba ny tena mahaliana ny fanontaniana. Ny tena manararaotra ChatRoulette dia ny fahafahana hahita ny mpiara-mitory ary koa mora foana sy haingana mahita ny mpiara-miasa ho an’ny fifandraisana.
Na izany aza, anarana mbola ho laharam-pahamehana ho an’ny chat
Raha tsy tianao ny olona ianao mifandray amin’ny, dia aza misalasala ny hanao veloma, ary ny hetsika ho amin’ny manaraka indray. Tonga ny Arabo chat, mahazo be dia be ny fahatsapana mazava, ary hahita zavatra mahaliana maro momba ny tontolo Arabo
← Ny Fivoriana Fivoriana
CHATROULETTE rosiana ny lahatsary amin'ny chat Roulette Chat Rouletka →
© 2020 Ny Lahatsary Amin'ny Chat Arabo